Yonke into ofuna ukuyazi malunga ne-CNC Machining
Phambi kokungeniswa kolawulo lwamanani olwekhompyuter (i-CNC), inkqubo yokuvelisa ibandakanya umsebenzi onzima wabantu, amaxesha amade ngokungeyomfuneko emveliso, ukumoshwa kwezinto, kwaye yayizaliswe yimpazamo. Namhlanje, iteknoloji iphucule kakhulu inkqubo yokuvelisa.
Ukuqaliswa kwetekhnoloji ye-machining ye-CNC kubonelela kwinqanaba eliphezulu lokuthembeka, okwenza iinkqubo zokuphindaphinda zizenzekelayo. Kodwa yintoni i-CNC machining? Zeziphi iimveliso ezinokwenziwa kwitekhnoloji ye-CNC? Isebenza njani i-CNC machining, kwaye zeziphi izinto ezinokusetyenziswa kwiinkqubo zokuvelisa ezisebenzisayoOomatshini be-CNC?
Eli nqaku lingena nzulu kwinto eyi-CNC machining, kunye neengcinga ezisisiseko ezichaphazelekayo kwinkqubo. Siza kuthetha ngezinto ezilungileyo ze-CNC yokuvelisa ngaphezulu kwemveliso yemveli, kunye negalelo le-CNC kwimveliso yanamhlanje.
Siza kujonga kwakhona isoftware ye-CNC. Okokugqibela, siqaqambisa into efunekayo kubantu abafuna ukuqeqesha ukuba babe ngoomatshini be-CNC, kwaye sixoxe ngokuqhubekayo kwihlabathi le-CNC machining.
Yintoni i-CNC Machining?
Isifinyezo i-CNC imeleUlawulo lweKhompyutha. Ukuchwetheza i-CNC yinkqubo yokuthabatha ebandakanya ukudala uyilo olumiliselwe isiko kwindawo yokusebenza ngokusebenzisa ulawulo lwekhompyuter. Inkqubo iyakhupha kuba imveliso yenziwa ngokukhupha izinto kwisiqwengana endaweni yokongeza izinto zokwenza imveliso.
Ukuchaneka kwe-CNC kunokuchazwa njengenkqubo yokuvelisa eyenziwe ziirobhothi. Inkqubo yenze ukuba kwandiswe imveliso ngenxa yokuba umatshini unako ukusebenza ngokuzenzekelayo ngaphandle kwesidingo somqhubi sokubakho rhoqo.
Yintoni iMbali ye-CNC Machining?
Umanduleli we-CNC ulawulo lwamanani (i-NC), inkquboichazwe nguMbutho weeNjineli zeMveliso"njengophawula ukuqala kohlaziyo lwesibini lweshishini kunye nokufika kwexesha apho ulawulo loomatshini kunye neenkqubo zorhwebo ziya kugqitha ukusuka kuyilo olungacacanga ukuya kwinzululwazi ngqo."
Ukuchaneka kwe-CNC kwaqala njengetekhnoloji ye-tape esekwe ngamanqindi1940 kunye no-1950phambi kokukhawuleza kuguquke kubuchwephesha be-analog kunye nedijithali kwii-1960s.
UJohn T. Parsonsuthathwa ngokuba nguyise we-CNC machining. Uvelise ulawulo lwamanani, nto leyo ingumgaqo wokuba i-CNC machining yakhelwe phezu kwayo. Kodwa nangaphambi kweeParsons, iInkqubo yoomatshini yayenziwengo-1751. Emva koko, ngo-1952, uRichard Kegg, esebenzisana neMassachusetts Institute of Technology (MIT), wavelisa umatshini wokuqala wokugaya we-CNC.
Zithini iiConcepts ezisisiseko ze-CNC Machining?
Ukuqonda ukuba isebenza njani i-CNC, kufuneka siqonde ezinye iikhonsepthi ezisisiseko.
Oku kuchaza ulawulo oluzenzekelayo lwezixhobo zomatshini. Ezi zixhobo zoomatshini zisukelawokugayakwii welders, iigrinders, izixhobo zokusika amanzi, kunyeUmatshini wokushicilela we-hydraulic.
Ezi ziinguqulelo ze-CNCs ezincinci kwaye zilunge ngakumbi ukuze zisebenze kwizinto ezithambileyo ezifana ne-wax, igwebu kunye neeplastiki. Olu hlobo loomatshini lusebenzisa iinguqulelo ezincinci zoomatshini be-CNC ukwenza iimveliso ezincinci, ubukhulu becala ngabazithandayo.
I-Computer-Aided Machining okanye iMveliso (CAM) isebenzisa isoftware ukwenza ikhowudi yokusebenzisa oomatshini be-CNC. Ukusebenza nenkqubo yeCAM, kufuneka izinto ezintathu:
Eyokuqala yisoftware eyalela umatshini malunga nemikhombandlela ekufuneka ihambile.
Ufuna umatshini okwaziyo ukuthatha imiyalelo.
Okokugqibela, kuya kufuneka ube nakho ukwenza emva kokuqhubekeka ukuguqula imiyalelo kulwimi olunokuqondwa ngoomatshini.
Olu lulwimi olusisiseko, kodwa olwahlukileyo lwekhompyuter olwenzelwe umatshini we-CNC ukuqonda ngokukhawuleza nokwenza ikhowudi ye-NC (eyaziwa ngokuba yi-G-khowudi). Olu lulwimi olusetyenziswa ngumdwelisi wenkqubo ukuxelela umatshini ngendlela yokwenza into.
I-postprocessor ngumguquleli oguqula i-G-Khowudi ibhalelwe umatshini omnye we-CNC ukuba ube yikhowudi enokuqondwa kwaye yenziwe ngomnye umatshini we-CNC.
Njani umsebenzi Machining CNC?
Oomatshini be-CNC basebenza ngokuthi imiyalelo yabo ifakwe kwisoftware ifakwe kwiikhompyuter zisebenzisa ikhibhodi encinci edityaniswe kumatshini. Inkqubo ye-CNC emva koko yenza le misebenzi icwangcisiweyo ngendlela efanayo neerobhothi.
Zeziphi iintlobo ezahlukeneyo zoMatshini beCNC?
Oomatshini abahlukeneyo be-CNC basebenza ngeenjongo ezahlukeneyo. Olunye udidi oluqhelekileyo loomatshini be-CNC zizinto zokusila, iiseyile, iirouters, i-plasma cutters, kunye neLaserJet cutter. Ungabona eminye imizekelo yeentlobo ezahlukeneyo zoomatshini be-CNC kunye nezinto abazenzayoApha.
Unokwenza ntoni oomatshini be-CNC?
Oomatshini be-CNC banokuvelisa uluhlu olwahlukeneyo lweemveliso ezivela kuluhlu olubanzi lwezixhobo, kubandakanya isinyithi, iiplastiki, igwebu kunye neenkuni. Ngethuba nje ukuba izinto zinokunqunyulwa, zingasetyenziselwa ukuvelisa iimveliso kumatshini we-CNC. CNClathes metalenokusetyenziselwa machining iintonga ngeenxa zonke, imisonto kunye nezangqa zangaphandle. Oomatshini bokusila i-CNC banokusetyenziselwa ukuqhubekekisa imiphezulu, iindlela eziphambili, kunye nezinye iimilo ezingaqhelekanga. Umatshini wokugrumba unokuba nemingxunya:Apha.
Isoftware ye-CNC ziiphakheji zesicelo ezibhala i-G-Code enokufundwa ngumatshini we-CNC. Le software ibizwa ngokubaUkuveliswa kweKhompyutha (CAM)okanyeUyilo oluNcediswa yiKhompyuter (i-CAD). Le software inoxanduva lokulawulwa kwamanani koomatshini be-CNC. Kuyanceda ukwenza uyilo oluya kutolikwa yinkqubo yekhompyuter kumatshini we-CNC.
Iindidi ezahlukeneyo zesoftware ye-CNC ineendlela ezithile ezisetyenziswayo:
Ukuzoba okuNcediswa yikhompyuter (i-CAD):Oku kusetyenziselwa ukwenza uyilo lwe-2D kunye ne-3D kunye namaxwebhu obuchwephesha.
Ukuveliswa kweKhompyutha (CAM):Ivumela abasebenzisi ukuseta umsebenzi kumasebe ukuze babonelele kwimisebenzi emininzi njengokuhamba komsebenzi, iindlela zendlela, kunye nokusika okokulinganisa.
Ubunjineli boNcedo lweKhompyuter (i-CAE):Ngaba iinkqubo zisetyenziswe kuyo yonke inkqubo yophuhliso ngexesha langaphambi kokulungiswa, kuhlalutyo, kunye nasemva kokuqhubekeka.
Zithini iinzuzo kunye nezinto ezingalunganga ze-CNC Machining?
Kanye njengayo nayiphi na enye itekhnoloji, i-CNC machining iza neendlela ezithile ezilungileyo nezingalunganga. Sijonge ezinye zazo ngezantsi.
Izinto eziluncedo ze CNC Machining
Ukuchaneka kwe-CNC kubambe indleko ebalulekileyo kwimveliso yesiko kuba kunciphisa iindleko zabasebenzi. Uwunciphisa kakhulu umda wempazamo kwimveliso. Ngapha koko, yenza ukuveliswa kobunzima ibe ngumsebenzi olula ngakumbi kunangaphambili.
I-CNC ikwanikezela ukuba bhetyebhetye kuyilo oluvumela isoftware ukuba iphinde yenziwe ngokutsha ukuze yenze iindawo ezintsha ngokupheleleyo okanye ichane iimpazamo.
Ezingeloncedo CNC Machining
Icala elisezantsi ukuya kumatshini we-CNC yindleko zokuqala zokusetha. Iinkampani zisenokufuna ukuthatha imali mboleko yokuthenga itekhnoloji ye-CNC. Kodwa, ukuba inkampani inokunyusa inzuzo nge-CNC machining, olo tyalo-mali lunokuphinda lubuyiswe ngokukhawuleza.
Ukuchaneka kwe-CNC kuphila ngokucinga ngokungafezeki kweekhompyuter. Oku kuthetha ukuba abanye abantu abasebenzisa i-CNC machining systems banokungayihoyi imeko yeempazamo, nto leyo eyenza kube lula ukuba iimpazamo zityibilike zingabonwa. Nangona kunjalo, ngoqeqesho olufanelekileyo, oku kungancitshiswa.
Okokugqibela, kuba yinkqubo yokukhupha, i-CNC machining ivelisa inkunkuma, enokuba neziphumo ezibi kokusingqongileyo. Nangona kunjalo, iinkqubo zolawulo lwenkunkuma zingafakwa endaweni ukuqinisekisa ukuba inkunkuma eveliswa ngokuveliswa koomatshini be-CNC inokuphinda isetyenziswe.
Ibaluleke njani i-CNC Machining kwiMveliso yaNgoku?
Ukuchaneka kwe-CNC kusebenze ngendlela entsha yokuvelisa okwangoku ngokusebenzisa imirhumo yokusebenza ngokukuko kunye nokuchaneka, ngalo ndlela kubonelelwa ngokuphuculwa okubonakalayo kwiindlela eziqhelekileyo zemveliso yanamhlanje. Oku kuthetha ukuba iinkampani ezisebenzisa i-CNC machining zigcina iindleko ngokwemiqathango yezabasebenzi kunye nexesha, zikhulisa inzuzo ekuhambeni kwexesha.
I-CNC ikwenzile iinkqubo ezinje ngokuqamba (ukuwelda amaphepha esinyithi, ukucheba, ukubetha imingxunya, kunye nokusika idangatye) kukhuselekile. Lukhetho olufanelekileyo lokuzenzela kuba oomatshini bayabhetyebhetye kwaye banokwenziwa ngokutsha.
Ngaba i-CNC ilunge ngaphezu kwe-3D Printing?
3D yoshicilelo kunye CNC machining zombini iindlela zokuvelisa. Umahluko obalulekileyo phakathi kwabo kukuba i-CNC machining yinkqubo yokukhupha, ngelixa ukushicilelwa kwe-3D yinkqubo yokongeza. Oku kuthetha ukuba eyokuqala idala iimveliso ngokukhupha izinto ezivela kwisiqwenga sokuqala, ngelixa elokugqibela lenza imveliso ngokongeza izinto.
Yeyiphi engcono phakathi kwezi ndlela zimbini? Kuxhomekeka kwizinto ezininzi, ezinje ngemathiriyeli esetyenziswayo, ukuntsonkotha kwamalungu, izakhono zabasebenzi, into eyenziwayo, kunye nokuqwalaselwa kwemali. Ke, enye indlela inokubalaselisa umsebenzi othile hayi enye.
Ukuba yi-CNC Machinist
Abachwephesha be-CNC abafuna ukusebenza bafuna inqanaba elithile loqeqesho kunye nemfundo ukungena kulo msebenzi.
Zeziphi izakhono ozifunayo ukuze ube ngu-CNC Machinist?
Oomatshini be-CNCUfuna ubuncinci idiploma yamabanga aphakamileyookanye uPhuhliso lwezeMfundo Jikelele (i-GED) ngaphambi kokuba baqhubeke nokufumana izakhono ezithile ze-CNC kwizikolo zobugcisa. I-GED siseti yeemvavanyo ezisetyenziselwa ukumisela ukuba umntu e-United States okanye eCanada unamabanga aphakamileyo kwizifundo zemfundo.
I-CNC machinists, abanezatifikethi ezivela kumaziko afana ne-IZiko leLizwe leZakhono zokuSebenza ngentsimbi(NIMS), yiba nethuba lokufumana ngaphandle kwesiqinisekiso.
Ndingalufumana phi uQeqesho lokuba yi-CNC Machinist?
Abantu ababhala iinkqubo ezenziwa ngoomatshini be-CNC abaziwa ngokubaAbaCwangcisi beCNC, Ngelixa abo bazimeleyo beqhuba oomatshini abaphantsi kwevenkile baziwa njengeAbaqhubi be-CNC.
Ukuba ufuna ukuba yinkqubo ye-CNC, uhlala uchitha ixesha elininzi njengomfundi okanye kwiziko lemfundo ephakamileyo. Abaqhubi be-CNC bahlala begqiba izifundo zexesha elifutshane, kwaye bafumane amava abo amaninzi emsebenzini.
Uninzi lwezikolo ziyafundisaUqeqesho olukhethekileyo lwe-CNC. Phakathi kwazo kukhoIYunivesithi yaseGoodwin, liziko elizichaza "njengesikolo somqhubi we-CNC" "eyenzelwe ukuba abafundi baqinisekiswe kwaye basebenze ebaleni ngexesha elifutshane, kwishedyuli eguqukayo."
Ngaba i-CNC Machining ilungile kwiProjekthi yam?
CNC machining ubhetyebhetye, kwaye isicelo sayo oquka amashishini amaninzi, kuquka aerospace, ezolimo, ulwakhiwo, ushicilelo, imveliso, emkhosini, kunye nokuthuthwa. Ke, ukuba iprojekthi yakho ifuna isixa esikhulu sokungqinelana, ukuchaneka, kunye nokusebenza kakuhle, i-CNC lolona khetho lwakho lubalaseleyo.
Liyintoni ikamva le-CNC Machining?
Njengeetekhnoloji ezinjekukubhadla okungeyonyanikwayeukufunda ngomatshiniithandwa ngakumbi, kulindeleke ukuba ukuthandwa koomatshini be-CNC kunyuke. Nangona abanye benokuba nexhala lokuba aba matshini banobugocigoci bayakuthatha imisebenzi ebantwini, oku akuhlali kunjalo xa ubuchwepheshe buphucuka, kuba kudala imisebenzi emininzi kwiindawo ezintsha.
Ukwanda kokusetyenziswa kwe-CNC machining kuya kuba nezibonelelo kubo bobabini abasebenzi kunye nabavelisi. Kwangaphambili, iinkqubo azikho nzima, kwaye ukhuseleko luyaphuculwa. Okokugqibela, inzuzo iya kunyuka ngenxa yokusebenza ngokukuko. Abathengi, kwelinye icala, baya kuxhamla kwiimveliso ezisemgangathweni ngakumbi.
Nceda ushiye lo mhlaba ungenanto.